ပိုကီမွန် (Go) ကိုအသစ်ပြုပြင်သည် Androidsis
ဟိုဆေး Alfocea | | Android ဂိမ်းများ, ပိုကီမွန် Go ကို
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကPokémon Go ကိုစတင်ခဲ့ခြင်းကကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ချက်ချင်းနီးပါးသည်မှာ Android နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များအတွက်ထိပ်တန်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းတွင်နံပါတ်တစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး Candy Crush ကိုယ်တိုင်အတွက်စံချိန်တင်ခဲ့သည်။ ဒီကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုအတော်များများဟာသုံးစွဲသူများရဲ့လွမ်းဆွတ်မှုအချက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီး၎င်းရဲ့ "retro" touch ကိုအခြေခံပြီးမိုဘိုင်းနည်းပညာအသစ်များနဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Pokémon Go သည်အောင်မြင်မှုအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သောအခါပထမနေ့နှင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ရေနွေးငွေ့ကိုစတင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သို့သော် Niantic ကုမ္ပဏီသည်ဤဂိမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကွယ်မှစတင်ခြင်းကိုမရပ်တန့်သေးပါ updates များကို သူတို့က features အသစ်များနှင့် function အသစ်များနှင့်အတူကတိုးတက်အောင်ပါပြီ။ ယခုမှာငါတို့ရှိသည် သတင်းနှင့်အတူအသစ် update ကို.
ပိုကီမွန် Go တွင်အသစ်အဆန်း
Android အတွက်Pokémon Go သည် ၄ ​​င်း၏ version 0.43.3 သို့အသစ်တင်သည့်အသစ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယခင်ဗားရှင်းတစ်သက်တာအတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အမှားအယွင်းအချို့ကိုဖြေရှင်းရန်အဓိကအားဖြင့်အာရုံစိုက်သောအသေးစား update တစ်ခုဖြစ်သည် (ဥပမာ - စာသားထဲတွင်ကျန်နေသေးသောနေရာလွတ်များကဲ့သို့) သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ဆက်လက်တိုးတက်နေဆဲဖြစ်သောအခြားအသစ်အဆန်းအချို့လည်းပါဝင်သည်။ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ။
ကိုယ်ပိုင် က်ဘ်ဆိုက် Pokémon Go မှကုမ္ပဏီကကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားသည် ဒီဗားရှင်းအသစ်မှာဘာအသစ်လဲ:
ပါမောက္ခဝီလိုဝိုင်ကဥများကိုဥများပေါက်ရန်လိုအပ်သောအကွာအဝေးပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောပုံစံများရှိသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Pokémon GO Plus အတွက်ဘက်ထရီနိမ့်နိမိတ်ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
Android အတွက်Pokémon Go ဗားရှင်းသစ်ကိုကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ကျက်ပြီးဖြစ်သည်။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းရှိပြီးသားပေမယ့်မပါလျှင်, အေးဆေးငြိမ်သက်စွာ! ဒါဟာနာရီကိစ္စဖြစ်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » ပိုကီမွန်ဂိုးကိုနောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်သည်
Google Pixel သည်ရေအောက်တွင်တစ်နာရီမျှအသက်ရှင်နိုင်သည်